Wararka Xanta Suuqa Kala Iibsiga: Chelsea Oo Dooneysa Aguero, Xiisaha Ibrahima Konate Ee La Liga Oo Kor U Kacay Iyo Qodobo Kale
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Xanta Suuqa kala iibsiga: Chelsea oo dooneysa Aguero, Xiisaha Ibrahima Konate ee La Liga oo kor u kacay iyo Qodobo kale
March 18, 2021 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Wargeysyada 0
Qeybta Danbe Suuqa kala iibsiga 18 maarso
Juventus ayaa diyaar u ah inay iska iibiso weeraryahanka reer Argentina Paulo Dybala iyadoo Tottenham iyo Chelsea ay labaduba fursad u heleen inay la soo wareegaan 27 jirkaan. dail stair
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal iyo Masar Mohamed Elneny, oo 28 jir ah, ayaa doonaya inuu saxiixo qandaraas cusub, waxaana uu sheegay inuusan u maleyneynin inuu waayihiisii ​​Gunners dhamaaday markii ay amaah ugu direen Besiktas xilli ciyaareedkii hore. the Standard
Blues ayaa diyaar u ah inay soo qaadato haddii ciyaaryahanka reer Argentin Aguero uu doorto inuu ka tago Man City uuna sii joogo horyaalka ingariiska sida ay ku warameyso Dail Mail
Borussia Dortmund ayaa dooneysa inay ku darto weeraryahankooda Liverpool Divock Origi safkooda ilaa iyo inta lagu heli karo qiimo dhimis, sida ay qortay Football Insider .
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Dortmund Dahoud qaab ciyaareedkiisii ​​ugu dambeeyay ayaa sare u qaaday wararka la isla dhexmarayo ee ah inuu ku wajahan yahay England, The Daily Mail ayaa sheegeysa in Chelsea iyo Manchester City ay loolanka ku jiraan. Daily Mail
Barcelona iyo Real Madrid ayaa diyaar u ah inay ku dagaalamaan saxiixa daafaca RB Leipzig Ibrahima Konate, sida ay qortay AS .
Emi Martinez waa goolhayihii ugu dambeeyay ee iska diiwaangeliya raadaarka Manchester United, sida ay qortay Football Insider .
Qeybta Hore Suuqa kala iibsiga 18 maarso
Weeraryahanka Arsenal Luke Plange ayaa qarka u saaran inuu ku biiro kooxda Derby County, sida laga soo xigtay Arsenal Youth.
Xavi ayaa ka fiirsanaya inuu qandaraaska u kordhiyo Al-Sadd – sida laga soo xigtay AS .
Daafaca Barcelona Junior Firpo ayaa waxaa xiiseynaya Milan – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Inter ayaa dooneysa inay Emerson Palmieri ka keento Chelsea xagaagan – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Memphis Depay ayaa laga yaabaa inuu ku qanco inuu sii joogo Lyon hadii ay ku guuleystaan ​​ololahooda ku aadan ku guuleysiga horyaalka Ligue 1, sida uu sheegay madaxweynaha kooxda Jean-Michel Aulas. Goal
Borussia Monchengladbach ayaa qaboojisay xiisihii ay u qabtay tababaraha Werder Bremen Florian Kohfeldt, sida laga soo xigtay Deichstube .